စက်တင်ဘာ 2018 – Myanmar Home & Decor Magazine Official Website
စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း Roller Blind များဖြင့်အလှဆင်ခြင်း
ရေးသားသူ လင်းလက် ဝင်နီ မှ
စက်တင်ဘာ 29, 2018 နေ့
ဈေးဝယ်လမ်းညွှန်အိမ်တွင်း အလှဆင် နည်းလမ်းများ ကဏ္ဍတွင်
ဟိုးအရင်ခေတ်တွေကတည်းက ယင်းလိပ်လိုက်ကာတွေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဆိုပေမယ့် ယနေ့ခေတ် မှာတော့ Roller Blind လို့ဆိုတဲ့ ယင်းလိပ်လိုက်ကာတွေက အထူးလူကြိုက်များလာတဲ့ ခန်းဆီးလိုက်ကာ ပုံစံဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ရိုးရှင်းသပ်ရပ်လှပတဲ့အပြင် သေသပ်စွာ လိပ်တင်ဖွင့်ထားလို့ရတဲ့အတွက် လူကြိုက်များ လာပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် မော်ဒန်အိမ်တွေ၊ မော်ဒန်ရုံးခန်းတွေမှာ ပြတင်းမှန်နေရာတွေ အကျယ်ကြီးထားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းကို အမြင်သာဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ လှပတဲ့ရှုခင်းတွေ၊ မြင်ကွင်းတွေကို လှစ်ဟပြီးပဲ ရှုမြင်ခံစားမလား၊ ဒါမှမဟုတ် လိုက်ကာချထားပြီးသီးသန့်လုံခြုံတဲ့နေရာလေးအဖြစ် ယာယီပိတ်ကာထားချင်လား။ ဖွင့်ထားထား ၊ ပိတ်ထားထား ၊ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် သေသပ်လှပနေစေဖို့ ယင်းလိပ်လိုက်ကာတွေက အရွေးချယ်သင့်ဆုံးလိုက်ကာပုံစံပါပဲ။
ယင်းလိပ်လိုက်ကာဖြစ်စေဖို့ အသုံးပြုထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေကလည်း ကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပါ တယ်။ ရွေးချယ်စရာ အမျိုးအစားတွေကလည်း စုံလင်လှပါတယ်။ ကျွန်မတို့မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ အမျိုးအစား ကတော့ Wall Art by Xenon ရဲ့ Personalised Printed Roller Blind and Curtain ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းလိပ်လိုက်ကာတွေကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုတဲ့အခါ အဓိကဆုံးဖြတ်ရမှာက အသုံးပြုထားတဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးအစားပါပဲ။ အဓိကအားဖြင့် ရွေးချယ်စရာအမျိုးအစား ၃ မျိုးရှိပါတယ်။ အရိပ်ရယင်းလိပ်(Mesh Blind) ၊ အလင်းပိတ်ယင်းလိပ်( Block-out Blind)၊ အထည်စနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ယင်းလိပ်စသဖြင့် ယင်းလိပ်လိုက်ကာ (၃) မျိုးရှိပါတယ်။ Wall Art by Xenon မှာတော့ အရိပ်ရ ယင်းလိပ်(Mesh Blind) နဲ့ အလင်းပိတ်ယင်းလိပ် (Block-out Blind) နှစ်မျိုးမှာ မိမိစိတ်တိုင်းကျ ဒီဇိုင်းတွေကို ပုံနှိပ်ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Wall Art by Xenon ယင်းလိပ်(Roller Blind) တွေရဲ့အားသာချက်တွေကတော့ ဒီဇိုင်းကို မိမိစိတ်ကြိုက် ပုံနှိပ်ယူနိုင်ခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတဖြစ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လွယ်ကူခြင်း၊ တပ်ဆင် အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းတို့အပြင် ပုံနှိပ်ရာမှာသုံးတဲ့ မှင်ကိုလည်း HP Latex Ink ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တာကြောင့် အနံ့လုံးဝကင်းစင်ပါတယ်။ ခဲ၊ နီကယ်ဓာတ်များ ကင်းစင်ကြောင်း ၊ Eco Logo နဲ့ Green Guard Certificate ရရှိပြီးသားလည်း ဖြစ်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရိပ်ရယင်းလိပ်လိုက်ကာ (Mesh Blind)တွေက နေရောင်စူးစူးဝင်ရောက်တဲ့ ပြတင်းမှန်ပေါက် ကျယ်တွေမှာ ရွေးချယ်တပ်ဆင်ဖို့ အကောင်းဆုံး အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အလင်းဖျော့ဝင်ရောက်စေပြီး အခန်းထဲကို အပူဝင်ရောက်မှုလျှော့ချပေးကာအခန်းကိုအေးမြစေပါတယ်။
အလင်းပိတ်ယင်းလိပ်လိုက်ကာ (Block-out Blind)တော့အခန်းထဲကို အလင်းလုံးဝမဝင်နိုင်အောင် ပိတ်ထားနိုင်မယ့် ယင်းလိပ်လိုက်ကာ အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခန်းတွင်း လွတ်လပ်လုံခြုံမှုကို အပြည့်အဝ ပေးတာကြောင့် အိပ်ခန်းတွေနဲ့ တီဗီထားတဲ့အခန်းတွေမှာ အသုံးပြုဖို့ အကောင်းဆုံး ယင်းလိပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအလင်းပိတ်ယင်းလိပ်လိုက်ကာကလည်း အခန်းထဲအပူမဝင်ရောက်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီး လေအေး ပေးစက်တောင် အသုံးပြုစရာမလိုဘဲအခန်းတွင်းအပူချိန်ကို ထိန်းပေးနိုင်မယ့် ယင်းလိပ်လိုက်ကာဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းလိပ်တွေကလက်တွေကျကျအသုံးတည့်လှတဲ့အပြင် အိမ်တွေ၊ ရုံးခန်းတွေမှာပါ အလှဆင်ပေးထား နိုင်တဲ့ လိုက်ကာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခန်းတစ်ခန်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မြင်ကွင်းအနေအထားမှာ ယင်းလိပ်လိုက်ကာကို မိမိစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းနဲ့ ပုံနှိပ်ဆင်အလှဆင်လိုက်တဲ့အခါ လှပကြည်နူးဖွယ်ရာအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးလိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းအပြင်အဆင်တွေမှာလည်း ယင်းလိပ်လိုက်ကာလေးတွေက လှပတဲ့ဒီဇိုင်းအသွင်အပြင် ဖြစ်စေပါတယ်။ Block-out Blind မှာဆိုရင် နှစ်ဖက်စလုံးကို ပုံနှိပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်အဓိကလမ်းမကြီးတွေနဲ့၊ လူစည်ကားရာနေရာတွေမှာတည်ရှိတဲ့ ရုံးခန်း၊ ဆိုင်ခန်း၊ စားသောက်ဆိုင်တွေအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ Brand နဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို အတွင်းရော၊ အပြင်ပါ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ဖြင့် ပြသနိုင်မယ့် ဒီလို Block-out Blind ကို အသုံးပြုသင့် ပါတယ်။ ပူတူတူးလေးတွေရဲ့ အခန်းကအစ ရုံးခန်းမျိုးအထိအသုံးပြုနိုင်ပြီး ပြင်ပအပူကိုလည်း ကာကွယ်ထားပေးသလို မြင်ကွင်းကိုပါလှပစွာ လှစ်ဟပေးမယ့် Wall Art by Xenon ယင်းလိပ်လိုက်ကာ (Roller Blind) တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြတင်းပေါက်ခန်းဆီးလိုက်ကာ ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါ သန့်ရှင်းထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူမှုရှိမရှိကို လည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သာမာန်ခန်းဆီးလိုက်ကာတွေက ကြီးမားလေးလံပြီးဖုန်တွေ၊ အမှိုက်တွေ စုဝင်နေတတ်ကာ လိုက်ကာကိုတန်းကနေ ပြန်ဖြုတ်ပြီး လျှော်ဖွှတ်ဖို့လိုအပ်လာတာကြောင့် အလုပ်ရှုပ်မှာ အသေအချာပါပဲ။ ယင်းလိပ်လိုက်ကာ(Roller Blind)တွေမှာတော့ ရှင်းလင်းထိန်းသိမ်း ဖို့ရာအတွက် ပြန်ဖြုတ်ချစရာမလိုဘဲ ကြက်မွေးတံမြက်စည်းလေးနဲ့တင် ဖုန်တွေကို အသာအယာလေး သန့်ရှင်းပေးလို့ရ ပါတယ်။
ယင်းလိပ်လိုက်ကာတွေကအိမ်တွေ၊ ရုံးတွေမှာမော်ဒန်ကျတဲ့ ပြတင်းပေါက် အပြင်အဆင်လေးမျိုး ဖြစ်စေပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းအပြင်အဆင်ဒီဇိုင်းကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ ယင်းလိပ်လိုက်ကာ ဖြစ်တာကြောင့် အခန်းထဲ လွတ်လပ်လုံခြုံစေဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အတွင်းဒီဇိုင်းလှပစေဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Wall Art by Xenon ယင်းလိပ်လိုက်ကာ(Roller Blind) တွေမှာ စိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းကို ပုံနှိပ်ပြီး တပ်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Wall Art by Xenon ရဲ့ယင်းလိပ်လိုက်ကာ(Roller Blind)နဲ့ ပက်သတ်ပြီး အသေးစိတ် ­သိရှိလိုသည်များကိုလည်း Xenon Premium Printing Shop အမှတ်(၇၈)၊ အနော်ရထာလမ်း၊ ၃၉လမ်းနှင့် ၄ဝလမ်း ကြား၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ ဖုန်း – ဝ၁ ၃၉၈၈၄၄ယ ဝ၉ ၄၂၈၃၀၇၇၇ရယ ဝ၉ ၂၆၄၅၉၆၇၂၂ သို့ ဆက်သွယ်နိုင်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါကြောင်း သတင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Trends Design Furnishing Co.,Ltd မှအသုံးများသောဖိအားခံနိုင်ရည်ရှိသည့် (Laminate) များ
စက်တင်ဘာ 12, 2018 နေ့
အသုံးများသောဖိအားခံနိုင်ရည်ရှိသည့် (Laminate) များ
အတွင်းပိုင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများတွင် မြင့်မားသောဖိအားခံနိုင်သော (High Pressure Laminate)များကို ထုတ်လုပ်ကာ ပရိဘောဂမျက်နှာခင်းအဖြစ် စတိုင်ကျလှပစွာ အသုံးပြုလာကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အရောင်အသွေး၊ အမျိုးအစားမှစ၍ တကယ့် သစ်သားထည် သို့မဟုတ် ကျောက်သားအထည်ကဲ့သို့ တူညီသောအသားထည်ရှိ၍ မည်သည့်အနေအထားဖြင့် သုံးသည်ဖြစ်စေ အမြင်အားဖြင့်လှပ၍ လုံးဝဖန်တီးမှုလက်ရာမြောက်သည်ဖြစ်ရာ အဆောက်အဦ အတွင်းပိုင်းပုံဖော် အလှဆင်သူဒီဇိုင်းနာများအတွက် စိတ်ကူးကောင်းသည်နှင့်အမျှ အကောင်းဆုံးသော တီထွင်ဖန်တီးမှုများ ရလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ Trends Design Furnishing Co.,Ltd မှလည်း အဆိုပါ လိုအပ်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် (High Pressure Laminate)များကို အောက်ပါ အရည်အသွေးများဖြင့် ထုတ်လုပ် ဖြန့်ချိပေးလျက်ရှိပါသည်။
Trends Design Furnishing Co.,Ltd မှ ဖိအားခံ(Laminate) ကို တန်ဖိုးအားဖြင့်သက်သာခြင်း၊ တာရှည်ခိုင်ခံ့ခြင်း၊ အထိအခိုက်အခြစ်ရာအစင်းကြောင်းများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းစသည့် အရည်အသွေးများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ အတွင်းပိုင်းနေရာရှိ မျက်နှာပြင်များတွင် ဒေါင်လိုက်ဖြစ်စေသို့မဟုတ် အလျှားလိုက်ဖြစ်စေ စုစည်း ညီညွှတ်မှုရှိစွာအသုုံးပြုနိုင်သည်။ ဖိအားခံ(Laminate) များသည် အမြင်ပန်း လှသကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်မှုလည်းကောင်းသည်။ အခြားသောသစ်သားထည်များနှင့်လည်း အလွယ်တကူပေါင်းစပ်၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဩဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းနည်းပညာများအသုံးပြု၍ အသွင်အပြင် အားဖြင့်လှပကြံ့ခိုင်မှုရှိစေရန်သာမက လိုအပ်သလိုအသုံးချနိုင်ရန်လည်း တီထွင်ထုတ်လုပ်ထား ပါသည်။
Laminate မျက်နှာပြင်တွင် ဗက်တီးရီးယားပိုးတွယ်ကပ် ရှင်သန်မနေနိုင်ရန် အထူး စီမံထားသောကြောင့် နေအိမ်များတွင် အသုံးပြုရန်လက်တွေ့ကျ အကျိုးရှိသကဲ့သို့ အများပြည်သူသုံးနေရာများအတွက်လည်း အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
ဓါတုဆေးဝါးဒဏ်မှကာကွယ်ပေးနိုင်သောူောငညအေန ကို အနံ့ပြင်း ဓါတုဆေးများဖြင့် အလုပ်ကြမ်း လုပ်ဆောင်ရသည့်တိုင် ထိုဆေးဝါးအနံ့အသက်များ၏ အန်္တရာယ်မှကာကွယ်နိုင် ရန်စီမံထားသည်။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးသောနေရာများ၊ ဆံပင်အလှပြင်ခန်းမများတွင်သာမက ၊ ဓါတုဆေးများအသုံးပြုသော ဓါတ်ခွဲခန်းများတွင်လည်း ဖိအားခံ (Laminate) များကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Trends Design Furnishing Co.,Ltd မှ ဖိအားခံ Laminate သည် တာရှည်ခံစနစ်ကိုရွေးချယ်ထားပါသည်။ Laminate ၏အရည်အသွေးတွင် အစင်းရာအခြစ်ရာခံနိုင်သောနည်းပညာထည့်သွင်းထုတ်လုပ်သည်။ အတွင်းပိုင်း နေရာများတွင် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အစင်းရာအခြစ်ရာများကို ကာကွယ်နိုင်သကဲ့သို့ လေးလံသောအလုပ်ကြမ်းဖိအားကိုခံနိုင်သဖြင့် ပညာရေးဆိုင်ရာနေရာများ၊ လက်လီရောင်းချရသည်နေရာများ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနေရာများနှင့် ရုံးများတွင် အသုံးပြုရန် သင့်တော်သည်။
သဘာဝဂုဏ်သတ်္တိကဲ့သို့ စီမံထားသဖြင့် ူောငညအေန သည်သစ်သား သို့မဟုတ် ကျောက်အရိုင်းတုံးများ နှင့်အသွင်သဏ္ဍာန်တူသည်။ သဘာဝနှင့် လိုက်လျော်ညီသောကြောင့် ဖိအားခံ(Laminate) နည်းပညာသည်သဘာဝနှင့်အလွန်လိုက်ဖက်သည်။ ကျွတ်ဆတ်ခြင်း မရှိသောကြောင့် လက်နှင့်ပွတ်တိုက်လျင်ပင် အရောင်ထွက်နိုင်သည်။ အပူဒဏ်ကိုလည်းလျော့ပါးသက်သာ၍ အထိအတွေ့ အားဖြင့်လည်း နူးညံ့မှုရှိပါသည်။ Laminate ကို မီးပူ၊ ရေစိုစာရွက်နှင့် ပိတ်စတို့ဖြင့် အလွယ်တကူပြုပြင်နိုင်သည်။
Trends Design Furnishing Co.,Ltd မှ အထူးစီမံထုတ်လုပ်ထားသော လက်ဗွေရာမထင်သည်(Laminate)များကိုလည်း ဈေးကွက်တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခ နည်းသောကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးရသော စားသောက်ဆိုင်၊ အသွားအလာ ထူထပ်ကြပ်တည်းသောနေရာများ နှင့် အမြင်အားဖြင့်သန့်ရှင်းသပ်ယပ်မှုရှိရန်လိုအပ်သော နေရာများတွင်အသုံးပြုရန် သင့်တော်ပါသည်။
Trends Design Furnishing Co.,Ltd မှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင့်နှင့် လိုက်ဖက်သောကုန်ပစ်္စည်းများကို ဆက်လက် တီထွင် လျက်ရှိပါသည်။ ယနေ့အချိန်အခါတွင် Trends Design Furnishing Co.,Ltd မှ ဖိအားခံ(Laminate)များကို တတိယပါတီအများအပြားမှ တစ်ဆင့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးလျှက် ကောင်သော ထောက်ခံချက်များလည်း ရရှ်ိလျက်ရှိပါသည်။ Trends Design Furnishing Co.,Ltd မှ Laminate များနှင့် ပက်သက်၍ သိရှိစုံစမ်းလိုပါက www.trendsdesignfurnishing.com , marketing@tdffurnishing.com သို့မဟုတ် ဖုန်း ဝ၁ ၆၈၅၇၆၅၊ ဝ၉ ၂၅၉၂၆၈၄၇၅ သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
မိုးရာသီမှာ အိမ်အတွင်းပိုင်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နည်းများ
စက်တင်ဘာ 9, 2018 နေ့
Promotionအိမ်တွင်း အလှဆင် နည်းလမ်းများ ကဏ္ဍတွင်
စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ……. တကယ်လို့ အပြင်ဘက်မှာ မိုးရွာနေလို့ အိမ်အပြင်မထွက်နိုင်လို့ပျင်းနေမှာ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါဘူး။ မိုးရွာနေတဲ့အချိန်အိမ်တွင်းမှာနေရင်း ပြုလုပ်နေလို့ရမယ့် အလုပ်လေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
(၁) အိမ်တွင်းသုံးလေစစ်ဇကာများကို သန့်စင် ဆေးကြောပေးပါ။ ဇကာတွေမှာဖုန်တွေ အမှိုက်တွေက အသုံးပြုတာကြာတဲ့အချိန် ဂျီးတွေနဲ့ထူနေတတ်ပါတယ်။ သန့်စင်သွားအောင်ဆေးကြောပေးပါ။ ဒါမှ အိမ်အပြင်ဘက်က ဝင်ရောက်လာမယ့်လေတွေကို အိမ်အတွင်းဝင်ရောက်တဲ့အချိန် သန့်စင်နေစေမှာပါ။
(၂) ကော်ဇောကို သေသေချာချာဖုန်ခါပါ။ လိုအပ်ပါက လျှော်ပါ။ ကော်ဇောဆိုတာက အိမ်ကြမ်းခင်းမှာ ထားတဲ့အရာမို့ တခါတလေ ညစ်ပတ်နေတာကို ပြန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးဖို့ မေ့လျော့နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ ကော်ဇောရဲ့ ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားပုံကို တွေ့ရမှာ သေချာပါတယ်။
(၃) မီးဘေးအချက်ပြ ခေါင်းလောင်းကို စစ်ဆေးပါ။ ခေါင်းလောင်းတွင်းက ဘတ်ထရီကောင်းမကောင်း၊ အသံမြည် မမြည် ကိုပြန်စစ်ဆေးပေးပါ။
(၄) လေအေးစက် ပန်ကာနဲ့ဇကာများကို ဆေးကြောပေးပါ။ ယခုအချိန်က မိုးတွင်းအစ ဖြစ်သောကြောင့် ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့နွေရာသီ တစ်ခုလုံး အသုံးပြုထားတဲ့ လေအေးပေးစက်ပန်ကာတွေမှာ ဖုန်တွေနဲ့ ကပ်နေတတ်ပါတယ်။ ပန်ကာမှာ အမှုန်တွေပိတ်နေခြင်းက အဲကွန်းကို လိုအပ်တဲ့ လေသန့်စင်မှုကို မပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အတွက် အိမ်မှာကလေးတွေရှိပါက ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှာချေခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးနည်းအနေနဲ့ အဲကွန်းပြင်သူများကို ခေါ်ပြီး ဆေးကြောပေးပါ။
(၅) ရေခဲသေတ္တာမှာ ကပ်နေတဲ့ရေခဲတုံးတွေကို ဖယ်ရှင်းပေးပါ။ ရေခဲတွေပိတ်နေခြင်းကြောင့် အအေးဓါတ် ပိတ်ဆို့ခြင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အေးသင့်သလောက် မအေးတာမျိုးဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
(၆) မျက်နှာကျက်မှာထားတဲ့ ပန်ကာက ဆောင်းတွင်းမှာသိပ်အသုံးမပြုရတဲ့အရာပါ။ ပန်ကာရဲ့ ဒလက်တွေမှာ ဖုန်တွေထူနေတတ်ပါတယ်။ ဖုန်တွေကို ဆေးကြောပေးပြီး ပန်ကာကို နာရီလက်တံလှည့်တဲ့အတိုင်း လှည့်မလှည့် ပြန်စစ်ပေးပါ။ နာရီလက်တံလှည့်တဲ့အတိုင်း လှည့်ထားပါက လေအေးကိုပိုမိုရရှိနိုင်စေပါတယ်။
မိုးတွင်းမှာ အိမ်အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းလေးတွေကို ဘယ်လိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာ သိပြီဆိုတော့ မိုးအေးအေးနဲ ့ကွေးမနေဘဲ သီချင်းလေးမြူးမြူးလေးကိုဖွင့်ရင်း အမြန်ပဲထပြီး ပြင်ဆင်လိုက်ပါတော့။ ဒါမှ သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီးသားလည်းဖြစ်မယ်။ အိမ်ထဲမှာ ဖုန်တွေ၊ အနံ့ဆိုးတွေမရှိနိုင်တော့ဘဲ သန် ့ရှင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ကျန်းမာတဲ့အိမ်ဂေဟာလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီပေါ့။
Ref; mymilestone, Photo – roofing.memo-ru.net
မိုးရာသီမွာ အိမ္အတြင္းပိုင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္နည္းမ်ား
စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ……. တကယ္လို႔ အျပင္ဘက္မွာ မိုး႐ြာေနလို႔ အိမ္အျပင္မထြက္ႏိုင္လို႔ပ်င္းေနမွာ စိုးရိမ္စရာ မရွိပါဘူး။ မိုး႐ြာေနတဲ့အခ်ိန္အိမ္တြင္းမွာေနရင္း ျပဳလုပ္ေနလို႔ရမယ့္ အလုပ္ေလးေတြကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။
(၁) အိမ္တြင္းသုံးေလစစ္ဇကာမ်ားကို သန႔္စင္ ေဆးေၾကာေပးပါ။ ဇကာေတြမွာဖုန္ေတြ အမႈိက္ေတြက အသုံးျပဳတာၾကာတဲ့အခ်ိန္ ဂ်ီးေတြနဲ႔ထူေနတတ္ပါတယ္။ သန႔္စင္သြားေအာင္ေဆးေၾကာေပးပါ။ ဒါမွ အိမ္အျပင္ဘက္က ဝင္ေရာက္လာမယ့္ေလေတြကို အိမ္အတြင္းဝင္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ သန႔္စင္ေနေစမွာပါ။
(၂) ေကာ္ေဇာကို ေသေသခ်ာခ်ာဖုန္ခါပါ။ လိုအပ္ပါက ေလွ်ာ္ပါ။ ေကာ္ေဇာဆိုတာက အိမ္ၾကမ္းခင္းမွာ ထားတဲ့အရာမို႔ တခါတေလ ညစ္ပတ္ေနတာကို ျပန္သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ေပးဖို႔ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ေကာ္ေဇာရဲ႕ ထူးထူးျခားျခားေျပာင္းလဲသြားပုံကို ေတြ႕ရမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
(၃) မီးေဘးအခ်က္ျပ ေခါင္းေလာင္းကို စစ္ေဆးပါ။ ေခါင္းေလာင္းတြင္းက ဘတ္ထရီေကာင္းမေကာင္း၊ အသံျမည္ မျမည္ ကိုျပန္စစ္ေဆးေပးပါ။
(၄) ေလေအးစက္ ပန္ကာနဲ႔ဇကာမ်ားကို ေဆးေၾကာေပးပါ။ ယခုအခ်ိန္က မိုးတြင္းအစ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့ေႏြရာသီ တစ္ခုလုံး အသုံးျပဳထားတဲ့ ေလေအးေပးစက္ပန္ကာေတြမွာ ဖုန္ေတြနဲ႔ ကပ္ေနတတ္ပါတယ္။ ပန္ကာမွာ အမႈန္ေတြပိတ္ေနျခင္းက အဲကြန္းကို လိုအပ္တဲ့ ေလသန႔္စင္မႈကို မျပဳလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ အတြက္ အိမ္မွာကေလးေတြရွိပါက ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးနည္းအေနနဲ႔ အဲကြန္းျပင္သူမ်ားကို ေခၚၿပီး ေဆးေၾကာေပးပါ။
(၅) ေရခဲေသတၱာမွာ ကပ္ေနတဲ့ေရခဲတုံးေတြကို ဖယ္ရွင္းေပးပါ။ ေရခဲေတြပိတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အေအးဓါတ္ ပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေအးသင့္သေလာက္ မေအးတာမ်ိဳးျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။
(၆) မ်က္ႏွာက်က္မွာထားတဲ့ ပန္ကာက ေဆာင္းတြင္းမွာသိပ္အသုံးမျပဳရတဲ့အရာပါ။ ပန္ကာရဲ႕ ဒလက္ေတြမွာ ဖုန္ေတြထူေနတတ္ပါတယ္။ ဖုန္ေတြကို ေဆးေၾကာေပးၿပီး ပန္ကာကို နာရီလက္တံလွည့္တဲ့အတိုင္း လွည့္မလွည့္ ျပန္စစ္ေပးပါ။ နာရီလက္တံလွည့္တဲ့အတိုင္း လွည့္ထားပါက ေလေအးကိုပိုမိုရရွိႏိုင္ေစပါတယ္။
မိုးတြင္းမွာ အိမ္အတြင္းပိုင္းပစၥည္းေလးေတြကို ဘယ္လိုျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရမလဲဆိုတာ သိၿပီဆိုေတာ့ မိုးေအးေအးနဲ ့ေကြးမေနဘဲ သီခ်င္းေလးျမဴးျမဴးေလးကိုဖြင့္ရင္း အျမန္ပဲထၿပီး ျပင္ဆင္လိုက္ပါေတာ့။ ဒါမွ ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ၿပီးသားလည္းျဖစ္မယ္။ အိမ္ထဲမွာ ဖုန္ေတြ၊ အနံ႔ဆိုးေတြမရွိႏိုင္ေတာ့ဘဲ သန္ ့ရွင္းတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔အတူ ေပ်ာ္႐ႊင္က်န္းမာတဲ့အိမ္ေဂဟာေလးကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၿပီေပါ့။